တရာ​တော်​များ – Shwemyanmar
၀ ================== ================== ၁. ဒီဘဝမှာ လက်ဝတ်ရတနာများ နှင့် အဝတ်ကောင်းများဝတ်ဆင်နိုင်ခြင်းဟာ အရင်ဘဝက သင်ဟာ ဘုန်းတော်ကြီးများကို သင်္ကန်းကပ်လှုခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ၂. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ အစားအသောက်ကောင်းများဖြင့် နေရပါသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက မရှိဆင်းရဲသားတွေကို ပေးကမ်းလှုဒါန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၃. ဘာဖြစ်လို့ ဒီဘဝမှာ ဆင်းရဲပြီး အဝတ်ကောင်းတွေ မဝတ်နိုင်ရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက သင်ဟာ ကပ်စေးနှဲ ကော်တရာဖြစ်ပြီး အလှုမလုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၄. ဒီဘဝမှာ ကိုယ်ပိုင်တိုက်ကြီး ခြံကြီးများနှင့် နေနိုင်ခြင်းဟာ အရင်ဘဝက ဘုန်းကြီးကေဟျာင်းတွေမှာ ဆန်အလှုပေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၅. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ တိုးတက်အောင်မြင်ပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်နေရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောက်ဖို့ ငွေလှုဒါန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၆. ဘာလို့ […]
Posted inတရာ​တော်​များLeaveaComment on သူတပါးထိခိုက်​နှစ်​နာ​အောင်​လုပ်​ပါကသင်​နိုင်​ပြီးဟုမထင်​နဲ့တ​နေ့ပြန်​၀၌လည်​မည်​
လှူဒါန်းသော်လည်း အကျိုးရနည်းပုံ (၈) မျိုး
လှူဒါန်းသော်လည်း အကျိုးရနည်းပုံ (၈) မျိုး ================== ================== (၁) စင်ကြယ်ခြင်းမရှိ ဖွယ်ရာခြင်းမရှိတာကို လှူဒါန်းခြင်း (၂) မိမိမကြိုက်သော အညံစား ပစ္စည်းကို လှူဒါန်းခြင်း (၃) အလှူခံနှင့် မအပ်စပ်သော ပစ္စည်းကို လှူဒါန်းခြင်း (၄) အလှူခံနှင့် ဝတ္ထုပစ္စည်း သင့်တော် မတော် မရွေးချယ်ဘဲ လှူဒါန်းခြင်း — (၅) မိမိမှာပြည့်စုံပါလျှက် တခါတလေသာ လှူဒါန်းခြင်း (၆) မလှူမီ စိတ်ရွှင်ပြမှုမရှိဘဲ လှူရန်စဉ်းစားခြင်း (၇) လှူသောအခါ စိတ်ရွှင်ပြမှု မရှိဘဲ လှူဒါန်းခြင်း (၈) လှူပြီးသောအခါ စိတ်နှလုံး မသာမယာ ဖြစ်တတ်ခြင်း =========== Hla Min
Posted inတရာ​တော်​များLeaveaComment on လှူဒါန်းသော်လည်း အကျိုးရနည်းပုံ (၈) မျိုး
ရှဲယူထားပြီး တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ သင့်အတွက် အခက်အခဲဆိုတာ မရှိတော့ပါ။ (သိကြားမင်း ဂါထာတော်)
ရှဲယူထားပြီး တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ သင့်အတွက် အခက်အခဲဆိုတာ မရှိတော့ပါ။ (သိကြားမင်း ဂါထာတော်) တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ်မယ်။ ￼ အခက်အခဲတွေနဲ့ အရမ်း ကြုံနေရရင်ဒီဂါထာလေး ရွတ်ကြည့်ပါလား… #သိကြားမင်း ဂါထာတော် တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ်မယ်။ ဝေဒါသာကု ၊ ကုသာဒါဝေ …. ဒါယသာတ ၊ တသာယဒါ သာသာဓိကု ၊ ကုဓိသာသာ …. ကုတကုဘု ၊ ဘုကုတကု ဝေ = ငါ၏ရန်သူ ဟူသမျှတို့သည် …. ဒါ = ဝေးစွာသော အရပ်သို့ …. သာ = လျင်စွာ …. […]
Posted inတရာ​တော်​များLeaveaComment on ရှဲယူထားပြီး တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ သင့်အတွက် အခက်အခဲဆိုတာ မရှိတော့ပါ။ (သိကြားမင်း ဂါထာတော်)
လူတစ်ယောက်၏ တန်ဖိုး (အလွန်းကောင်းတဲ့ အသိပညာပေး ပို့စ်ကောင်းတစ်ခုပါ)
လူတစ်ယောက်၏ တန်ဖိုး (အလွန်းကောင်းတဲ့ အသိပညာပေး ပို့စ်ကောင်းတစ်ခုပါ) တစ်ခါက နာမည်ကြီး တက္ကသိုလ်မှ ဆရာတစ်ဦးသည် ချောင်ကျသော ရွာတစ်ရွာသို့သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ရွာသို့ရောက်သော် လှေတစီးငှားပြီး မြစ်တစ်လျှောက် လည်ပတ်ခဲ့သည်။ လှေစတင်ထွက်သောအခါ ဆရာက လှေသမားအား…… ” ခင်ဗျား သချာင်္ဗေဒတတ်သလား” ” ကျွန်တော် မတတ်ပါဘူး” “ရူပဗေဒ တတ်သလား” “ဒါလဲ မတတ်ပါဘူး” ” ဒါဆိုရင် ခင်ဗျား ကွန်ပျူတာသုံးတတ်သလား” “စိတ်မကောင်းပါဘူး… ဒါလဲ ကျွန်တော်မတတ်ပါဘူး” ဆရာမှာ ခေါင်းခါပြီး “သချာင်္မတတ်ရင် လူ့ဘ၀ရဲ့၆ပုံ၂ပုံကိုခင်ဗျားဆုံးရှုံးမယ်၊ ရူပဗေဒ မတတ်ရင် လူ့ဘ၀ရဲ့ ၆ပုံ၁ပုံကို ဆုံးရှုံးမယ် ၊ ကွန်ပျူတာ မတတ်ရင် လူ့ဘ၀ရဲ့ ၆ပုံ၁ပုံကို ဆုံးရှုံးမယ် ၊ ခင်ဗျားရဲ့ ဘ၀၆ပုံ၎ပုံဟာ ဆုံးရှုံးသွားပြီပဲ….” […]
Posted inတရာ​တော်​များLeaveaComment on လူတစ်ယောက်၏ တန်ဖိုး (အလွန်းကောင်းတဲ့ အသိပညာပေး ပို့စ်ကောင်းတစ်ခုပါ)
မြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင် ဟောကြားထားသော မိတ်ဆွေစစ် (၁၆)ယောက် မြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင် ဟောကြားထားသော မိတ်ဆွေစစ် (၁၆) ယောက် (က) ဥပကာရက မည်သော ကျေးဇူးပြုတတ်သော မိတ်ဆွေစစ် (၄)ယောက် ………………………………………………………………………………. ၁။ မိမိက နေမကောင်းလျှင်၊ ဒုက္ခရောက်နေလျှင် စောင့်ရှောက်တတ်သော မိတ်ဆွေစစ်။ ၂။ မိမိက မေ့လျော့တတ်လျှင် စည်းစိမ်ဥစ္စာကို စောင့်ရှောက်တတ်သော မိတ်ဆွေစစ်။ ၃။ မိမိက ကြောက်ရွံ့တတ်လျှင် အားကိုး အားထားရာဖြစ်သော မိတ်ဆွေစစ်။ ၄။ မိမိက ပြုဖွယ် ကိစ္စရှိလာလျှင် လိုအပ်သည်ထက် နှစ်ဆ ကူညီတတ်သော မိတ်ဆွေစစ်။ (ခ) သမာနသုခဒုက မည်သော ဆင်းရဲအတူ ချမ်းသာအမျှ မိတ်ဆွေစစ် (၄)ယောက် ………………………………………………….. ၁။ သူ၏ လျှို့ဝှက် ထားသော အကြောင်း […]
Posted inတရာ​တော်​များLeaveaComment on မြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင် ဟောကြားထားသော မိတ်ဆွေစစ် (၁၆) ယောက်
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ခန္ဓာဝန်မချမီ ၂ ရက်အလိုတွင်..နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ခန္ဓာဝန်မချမီ ၂ ရက်အလိုတွင်..နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ခန္ဓာဝန်မချမီ ၂ ရက်အလိုတွင်..နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော် (၁၅.၁၀.၁၉၆၂) သီတင်းကျွတ် လပြည့်ကျော် ၂ရက်နေ့ ည ￼ [တရားပဲအားကိုးပါ တရားတော်] ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက ဘုရားဖြစ်လာတော့ သြော် … ငါ့မှာ အတုမရှိ ဘုရားတော့ ဖြစ်လာပြီ၊ ငါ့ထက် သာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ရှိရင်ဖြင့် ငါကိုးကွယ်မယ်။ ပူဇော်မယ်လို့လျှောက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ ၃၁ဘုံထဲမှာ ဘုရားထက် သာတဲ့သူ တစ်ယောက်မှမမြင်ဘူး။ ဒီတွင်မှ ငါသည် ဘယ်နှယ်ကြောင့် ဘုရားဖြစ်လာပါလိမ့်မတုံးလို့ဆင်ခြင်လိုက်တော့ ၊သြော် .. တရားအားထုတ်လို့ ဘုရားဖြစ်လာတာ။ ဒါဖြင့် တရားပဲ ကိုးကွယ်မှပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်ဟာပေါ်ပေါက်ပြီး တရားပဲကိုးကွယ်ပူဖော်တယ်လို့[…]
Posted inတရာ​တော်​များLeaveaComment on မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ခန္ဓာဝန်မချမီ ၂ ရက်အလိုတွင်..နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်